News - Xaaladda dhaqaale iyo isbeddelka suuqa birta sannadkan
Waxaan ka caawinnaa adduunka inuu koro ilaa 1983
Shandong Huayi Birta Qalabka Co., Ltd.
Carbon/daawaha Tube Steel aan xuduud lahayn
Tube aan xuduud lahayn
Saxan Steel ahama
Saxanka iska caabbinta
Bar laba geesle ah
Xaaladda dhaqaale iyo isbeddelka suuqa birta sannadkan
Sannadka 2021, hawlgalka guud ee dhaqaalaha ee warshadaha mishiinnada ayaa tusi doona isbeddel xagga sare ah xagga hore iyo xagga dambe, iyo heerka kobaca sannadlaha ah ee qiimaha warshadaha lagu daray wuxuu noqon doonaa qiyaastii 5.5%. Baahida birta ee ay abuurtay maalgashiyadan ayaa soo bixi doonta sanadkan. Isla mar ahaantaana, baahinta tallaallada ayaa sii yareyn doonta saamaynta uu cudurku ku yeelan karo dhaqaalaha, sidaas awgeedna waxay kor u qaadeysaa koritaanka wax -soo -saarka iyo isticmaalka.
Gobolku wuxuu iftiimin doonaa dhisidda aagag muhiim ah, wuxuu diiradda saari doonaa “laba cusub oo mid culus ah” wuxuuna kaabaa daciifnimada guddiga gaaban, wuxuuna ballaarin doonaa maalgashiga wax -ku -oolka ah; Waxaan dardargelin doonnaa dhismaha 5g Internet -ka warshadaha iyo xarunta xogta weyn, waxaan hirgelin doonaa cusboonaysiinta magaalooyinka, waxaanna kor u qaadi doonnaa isbeddelka bulshooyinkii hore ee magaalooyinka. Jawiga hawlgalka ee warshadaha waxsoosaarka ayaa sidoo kale la sii wanaajin doonaa, waxaana la filayaa in baahida birta ay ahaato mid deggan. Suuqyada caalamiga ah, oo ay saameeyeen cudurrada faafa, suuqyada soo baxaya iyo waddammada dhaqaalahoodu hooseeyo waxay la kulmi doonaan dhibaatooyin dhaawacyo muddo dheer ah oo aad u daran kadib dhibaatada ka dib iyada oo ay ugu wacan tahay booska siyaasadda oo kooban.
Ururka birta iyo biraha dunidu wuxuu saadaaliyay in baahida biraha ee dunidu ay kori doonto 5.8% sannadka 2021. Heerka koritaanka adduunku waa 9.3% marka laga reebo Shiinaha. Isticmaalka birta ee Shiinaha ayaa sanadkan kordhaya 3.0%. Qeybtii hore ee sanadka 2021, soosaarka biraha ceyriinka ah wuxuu ahaa 486.9 milyan oo tan, oo kor u kacay 10% sanadkiiba. Saddexdii bilood ee hore ee sannadkan, soosaarka biraha cayriin ee Shiinaha ayaa kordhay 36.59 milyan oo tan sanadkiiba. Kororka joogtada ah ee waxsoosaarka birta cayriin ayaa helay dareen xooggan. Komishanka horumarinta qaranka iyo dib -u -habaynta iyo wasaaradda warshadaha iyo tiknoolajiyadda macluumaadka ayaa si is -dabajoog ah u sheegay inay lagama maarmaan tahay in si adag loo yareeyo wax -soo -saarka birta cayriin si loo hubiyo in soo -saarka birta cayriin uu hoos u dhaco sannadba sannadka ka dambeeya. Tilmaam shirkadaha birta iyo birta si ay uga tanaasulaan habka horumarineed ee baaxadda leh ee ku guuleysiga tiro ahaan, iyo inay horumariyaan horumarinta tayada sare leh ee warshadaha birta iyo birta.
Marxaladda dambe, dalabka suuqa ayaa muujinaya isbeddel daciif ah, iyo dheelitirka u dhexeeya sahayda iyo baahida ayaa wajahaya imtixaan. Markay cimiladu qabow noqoto oo sicirka birtu kor u kaco, baahida biraha ayaa daciiftay. Shirkadaha birta iyo birtu waa inay fiiro gaar ah u yeeshaan isbeddelada suuqa, si macquul ah u diyaarsadaan wax -soo -saarka, hagaajiyaan qaab -dhismeedka badeecada sida loo baahdo, hagaajiyaan heerka badeecada iyo tayada, oo ay ilaaliyaan sahayda suuqa iyo dheelitirka dalabka. Xaaladda caalamiga ah weli waa mid cakiran oo daran, dhibka dhoofinta birta ayaa sii kordhaysa. Maaddaama aan la xakameyn cudurka faafa ee dibedda, silsiladda sahayda ee Mareykanka iyo Yurub ayaa wali xaniban, taas oo saameyn weyn ku leh soo kabashada dhaqaalaha. Marka la eego asalka tallaalka taajka cusubi wuu ka hooseeyaa intii la filayay, soo -kabashada silsiladda sahayda ee caalamiga ah ayaa laga yaabaa inay dib u dhacdo, iyo dhibka dhoofinta birta Shiinaha ayaa la sii kordhin doonaa.
Waqtiga dhejinta: Jul-03-2021
Qalabka birta Shandong Huayi Co., Ltd., oo la aasaasay 2020, wuxuu leeyahay xuquuq soo dejin iyo dhoofinta madaxbannaan, badiyaa suuqa dibedda. Shirkadda ay ku xiran tahay, Shandong Liaocheng Jinquan Steel Co., Ltd., waxay inta badan ku jirtaa suuqa gudaha, iyada oo macaamiishu ay joogaan dalka oo dhan.
Aqoonta birta (biibiile bir ah oo aan xuduud lahayn a ...
Xaaladda dhaqaale iyo isbeddelka suuqa birta ...
Falanqaynta xaaladda warshadaha birta 2021
Dheelitir la'aanta sahayda iyo baahida! Macdanta birta ...
Saadaasha isbeddelka suuqa ee birta aan xuduud lahayn ...